अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिलो मामिला दुई महिनाअघि आएको थियो । त्यसयता यो भाइरस सुपरपावर मुलुक अमेरिकाभर फैलिसकेको छ । सोमबार विहानसम्ममा त्यहाँ तीन लाख ३६ हजार जना यो भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । यस्तै नौ हजार छ सय भन्दा धेरैले त ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् ।
यदि हामीले आज अमेरिका यो वैश्विक महामारीको प्रमुख केन्द्र बनेको भन्यौं भने पनि यो कुरा गलत हुँदैन । संक्रमितको मामिलामा पनि यो चीनको तुलनामा चार गुणाभन्दा धेरै हो ।
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनमा शून्यमा झर्ने तरखरमा छ । तर संक्रमणकै मामिलामा इटली र स्पेनलाई पनि उछिनेर अमेरिका एकदमै नराम्ररी प्रभावित हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
तर अमेरिकी अधिकारीहरु यो कुरा स्विकार गर्न तयार छैनन् जब संक्रमणको अवस्थाले अमेरिकाको वास्तविक अवस्थालाई नंग्याइसकेको छ ।
यो संक्रमणबाट लड्न अमेरिकाले तीन तरिका अपनाएको थियो जसमा उसका धेरै कमजोरीहरु पनि देखिए तर यसबीच विश्वले एउटै सुपरपावर मुलुक अमेरिकाको केही सकारात्मक पक्षलाई पनि देख्न पायो ।
१. मेडिकल उपकरणको आपूर्तिमा कमी
जब कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिन थाल्यो र देशभरीका अस्पताल र चिकित्सकहरुले आवश्यक बस्तुहरुको माग गर्न थाले तब अमेरिकामा मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा भेन्टिलेटरको ठूलो अभाव भयो । अति प्रभावित इलाकाहरुमा त यो अभाव अझ धेरै देखियो । चिकित्सकलाई आफू बाँच्ने वा बिरामी बचाउने भन्ने धर्मसंकट देखियो ।
पर्याप्त मेडिकल सामग्रीहरु नहुँदा कतिपय अस्पतालले प्रयोग भइसकेका सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गरे । भेन्टिलेटरको अभावका कारण कतिपय राज्यका अधिकारीहरु अझै चिन्तित छन् । अघिल्लो मंगलबार न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोले धेरै अमेरिकी राज्यहरुले संघीय सरकारसँग मिलेर प्रतिस्पर्धामा मेडिकल उपकरण खरिद गरिरहेको गुनासो गरे । यसको कारण आवश्यक सामग्रीहरुको मूल्यले आकाश छोइरहेको उनको गुनासो थियो ।
अमेरिकाको जर्ज वासिङ्टन विश्वविद्यालयमा स्वास्थ नीति तथा प्रबन्धका प्राध्यापक जेफरी लेवी अमेरिकी सरकार आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नमा पूरै विफल भएको बताउँछन् ।
अमेरिकी सरकारसँग यो महामारीबाट बच्न न त संसाधन थियो न त तयारी नै ।
२. शंकास्पद व्यक्तिहरुको परीक्षणमा ढिलाई
प्राध्यापक जेफरी लेवी कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रसारलाई रोक्न जतिसक्दो धेरै मानिसहरुको स्वास्थ परीक्षण गराउनु एउटा प्रभावकारी उपाय भएको बताउँछन् । यो काम दक्षिण कोरिया र सिंगापूरले समयमै गर्‍यो र उनीहरु यो विपतबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित रहे । तर अमेरिकी प्रशासन भने यही कुरामा पछि पर्‍यो ।
समयमा नै व्यापकरुपमा परीक्षण गरेर संक्रमितलाई निश्चित क्षेत्रभित्र राखिएको थियो भने लकडाउनको उपाय लागू गर्नु पर्ने थिएन ।
लकडाउनको कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ र अहिले लाखौं मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् ।
प्राध्यापक जेफरी यो कमजोरीका लागि ट्रम्प प्रशासन जिम्मेवार भएको बताउँछन् । ट्रम्पले महामारीको समाधान गर्ने एक दशकभन्दा पुरानो योजनालाई पनि खारेज गरिदिए । उक्त योजना राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको पालामा बनेको थियो । उनले यो व्यवस्थालाई खारेज मात्र गरेनन्, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरुको पद रिक्त राखे ।
महामारीलाई रोक्नमा ट्रम्प प्रशासनको ढिलाइ र लापरबाही एकदमै स्पष्टरुपमा देखिएको जेफरीले बताए ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म जति पनि व्यक्तिहरुको परीक्षण भएको छ, फेब्रुअरी महिनामा गरिएको सुरुवाती परीक्षणमा मानिसहरुलाई अमेरिकाका एक दुई ओटा प्रयोगशालामा पठाइएका थिए । अमेरिकी सरकारको लापरवाही यसमा पनि उजागर हुन्छ । किनभने परीक्षणको विधिमा कमजोरी देखिएको थियो ।
अमेरिकी सरकारले मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा पचास लाख मानिसहरुको कोरोना परीक्षण गराउने बाचा गरेको थियो तर योसँग सम्बन्धित आँकडाहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा विश्लेषण गर्दा मार्च ३० सम्म दश लाख व्याक्तिको मात्र परीक्षण गरिएको पाइयो ।
अन्य देशको तुलनामा यो परीक्षण धेरै हो तर अमेरिकाको जनसंख्याको अनुपातमा यो एकदमै न्यून हो ।
समस्या यहाँ अन्त्य हुँदैन । सुरुवातमा अमेरिकाले कम मानिसहरुमा कोरोना परीक्षण गर्‍यो । संक्रमण बढेको पाएपछि परीक्षण संख्या बढाउँदै गर्दा सीमित ल्याबमा यति धेरै नमुना आउन थाले कि त्यसको परिणाम आउन हप्ता दिन लाग्न थाल्यो । अहिले परीक्षणको परिणाम कुर्दै गरेका धेरै मानिसहरु अन्धकारमै छन् आफूलाई संक्रमण भएको वा नभएको बारेमा ।
३. शीर्ष नेतृत्वको गलत बयान र राजनैतिक टकराब
गत मंगलबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशको भयावह अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै नागरिकलाई अप्ठ्यारो अवस्थाका लागि तयार रहन आह्वान गरे । एक हप्ताअघिसम्म राष्ट्रपति ट्रम्प अप्रिलको मध्य वा इस्टरको विदासम्ममा अवस्था सामान्य हुने र सबैको कारोबार पुनः पुरानो अवस्थामा फर्किने कुरामा आशावादी थिए र सार्वजनिक बयान पनि त्यसैअनुरुप दिँदै आइरहेका थिए ।
जनवरी र फेब्रुवरीमा चीनबाट कोरोना भाइरस फैलिएर विभिन्न क्षेत्रहरु प्रभावित हुँदै इटालीमा भयावह अवस्था उत्पन्न हुँदासम्म राष्ट्रपति ट्रम्प अवस्थालाई सामान्य बताइरहेका थिए । जब अमेरिकामा पहिलो संक्रमण देखियो तब पनि राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका अधिकारीहरु यो अवस्था नियन्त्रणभित्र रहेको र गर्मीको समयमा यस्ता भाइरस आफै कमजोर भएर जाने कुरामा विश्वस्त थिए ।
सरकार तथा शीर्ष नेतृत्वबाट गलत बयानका कारणले अमेरिका समस्याको चंगुलमा फस्न गयो ।
यसअलावा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटलाई पनि अल्झाइरहे । उनले न्युयोर्कमा डेमोक्रेटिक गभर्नर एन्ड्रु कुओमाको खतराको चेतावनीलाई खुल्लारुपमा आलोचना गरिरहे । उनले मिशिगनका ग्रेचेन ह्विमरमाथि पनि ट्वीटरको माध्यमबाट हमला गरि नै रहे ।
४. सामाजिक दूरीको उपाय असफल
अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको समुद्री तटमा बसन्त ऋतुको विदा मनाउन कलेजका विद्यार्थीहरु भरिएका छन् । न्युयोर्कमा पनि सार्वजनिक यातायातमा अवस्था त्यस्तै छ । लुजियानामा एक चर्चका पादरी टोनी स्पेलमाथि त हजारौं मानिसहरुलाई भेला गराएको आरोपमा मुद्दा नै लगाइएको छ ।